Gorfayn iyo Iftiimin Dagaalka Tukaraq. Qalinkii: sadam osman kaabsh. | Somaliland Today
← “Isbarbar Yaaci Marka Madaxweynuhu Dhoofayo Amma Soo Degaayo Meesha Way Ka Baxday Waana Talaabo Wanaagsan”.Axmed Yuusuf Yaasin
DAAWO: Xisbiga Mucaaridka ah ee WADDANI oo Dhaliilay Safarkii Madaxwaynaha ee Jabuuti, Kana Hadlay Khilaafka Xuduudeed ee Somaliland iyo Somalia. →
Gorfayn iyo Iftiimin Dagaalka Tukaraq. Qalinkii: sadam osman kaabsh.
Cidkasta oo Reer Somaliland ah oo Maanta dagaalkaas dhegtoodu soo gaadhay aad bay uga xumaadeen colaaddaa cusub ee Somaliland faraha la gashay.
Meesha dagaalku ka dhacaayo ee Gobolka Sool waxa uu u baahanyahay in dawladnimada iyo mashaariicaha la gaadhsiiyo oo heerkooda wacyi iyo aqoomeed kor loo soo qaado ayadoo hab waanwaan nabadeed loo maraayo, ama hab dib u heshiisiineed. Sidii Somaliland ku heshiisay 1991.
Dagaal fildaran oo kasmada wanaagsani diidayso waakan Maanta saansaankiisa colaadeed ka soo if baxay Tukaraq. Waa ifafaaalo caqli xumo ku ah Somaliland hadday geliso dagaalkaas ciidan hubaysan oo xoog kaga jawaaba, cudud iyo maalna ay ku taageerto. Taas waxaan u leeyahay Somaliland Maanta
ma taagna xaalad ay gasho dagaal, sababtoo ah ma dammaanad qaadi karto cidda dhaawacyo halis ahi haleelaan mana laha cisbitaallo ugaara ciidanka oo caafimaadkooda kafaalo qaadaya, ma dammaanad qaadi karto masruufidda, dhaqalaysiinta, ababinta iyo waxbarashada ubadka aabbayaashood ku geeriyoodaan dagaalkan.
Dawlad taag daran oo ay ku hoos noolyihiin shacab sicir barar iyo maceeshad qaaliya la ciirciiraya oo ciddii kafaalo qaadaysayna jiidaha iyo duurka ugu jiraan; waa ayaan darro in dagaal iyo halaak dhiig ku daato loo horseedo iyadoo marmarsiiyo looga dhigaayo Somaliland dhul ay leedahay oo ka maqan bay sugaysaa.
Qalinkii: Sadam Osman